Xisbiga midigta fog wuxuu tijaabinahayaah dulqaadka Sweden | Somaliska
Maanta wadanka Sweden waxaa loo dareeray goobaha cod bixinta waxaana wali [caption id="attachment_668" align="alignright" width="300" caption="Hogaamiyaha xisbiga midigta fog, Sweden Democrats (SD)"] [/caption] socdata cod bixintii doorashada guud, oo aan wali wax natiijo ah ka soobixin, Waxaase cabsi weyn laga qabaa in xisbiga xag-jirka ah(SD) uu markii u horaysay baarlamaanka wadanka Sweden wakiilo ku yeesho. Inkasta oo ay soo badanaysay niyad wanaaga dadka shacabka ah u hayaan dadka shisheeyaha ah, hadana dhawr ra’yi aruurin oo la sameeyey waxay muujinayaan in xisbiga ku caanka baxay shisheeye nacaybka, doorashadani fursad u siin doonto in afkaartiisa mayalka adag markii ugu horeysay aqalka baarlamaanka gaarto. Xisbigaan xag-jirka ah ee uu hogaamiyo Akesson ayaa lagu wadaa in uu helo codad ka badan boqolkiiba 4, taas oo u muuqata in uu baarlamaanka kuraas ku yeelan doono. Xisbigani malahan qorshe wax qabad oo cad marka laga reebo naceybka xad dhaafka ah ee uu u qabo guud ahaan qaxootiga, gaar ahaan Muslimiinta ku soo badanysa wadanka Sweden. Hogaamiyaha xisbigani lama gabado nacaybka uu u qabo dad Muslimiinta ah wuxuuna muslimiinta horay ugu tilmaam qatarta ugu weyn ee Sweden dibada oga soo fool leh asagoona intaas ku sii daray in lagaba yaabo in uu Sweden ka dhaco kacdoon Islaami ah. Soo kordhida dulqaadka Afkaar aruurin uu sameeyey machadka magaciisa loo soo gaabiyo SOM, kana dhacday magaalada Göteborg dadkii ka soo qayb galay 36 boqolkiiba waxay u cadeeyeen in ay u arkaan in Sweden ajaanibta joogtaahi aad u badanyihiin. Markii lagarab dhigo isla ra’yi aruurin nooceeda ha ,oo la sameeyey 1993 natiijadii ka soo baxday waxay is dhinta 52boqolkiiba, waxaa dadka arimahan ka hadalay u aanaynayaan in ay jiraan ururo ka dhaqaalo badan kana fir-fircoon xisbiga xag-jirka ah, oo u ol-oleeya cunsuriyad nacaybka. Afkaarta qaldan Dhanka kale ayada oo uu soo hagaagayo tobankii sono ee la soo dhaafay xariirka ka dhexeeya dadka wadanka u dhashay iyo kuwa soo galay, hadana waxaa aad u soo badanaya dadka kasii fagaanaya diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah. Jaamacada la yiraahdo Linnaeus, oo ayana dhankeeda isku dayday in ay wax ka ogaato dadka reer Sweden sida ay u arkaan Islaamka iyo mulimiintaba waxay ku ogaato in boqolkiiba 50 dadka wadankan u dhashay aysan u riyaaqsanayn diinta Islaamka iyo Muslimiinta midnaba halka 19 kali ah u arkaan in muslimiintu xaq u leeyihiin in diintooda sida ay doonaan iyaga oo xor ah in ay ugu cibaadaysan karaan.Andreas Malm oo buug ka qoray Islaam nacaynka( Islamophobia) ka jira Sweden ayaa hoosta ka xariiqay in xataa laga yaabo in wadamo kale oo Europe ah lagu arko Islaam nacayb caynkan oo kale ah. Taageerada Ciraaqiyiinta Jimmie Akesson, hogaamiyaha xisbiga xag-jirka ah wuxuu ku adkaysanayaa in aan xisbigiisu cunsiri ahayn uuna aqbalayo bulsho dhaqamo kala duwen leh, si uu hadalakaas u meelmariyana wuxuu indhaha dadka ku jeediye nin ka mid ah Kiristanka laga tirada badanyahay ee Ciraaq, kaas oo ku biiray xisbiga midigta fog. Ninkan Ciraaqiga ah ee xisbigaas maciinka biday ayaa ku doodaya in xisgigaani yahay xisgiga kali ah ee ka soo horjeeda in labo qof oo isku jinsi ah is guursadaan. Magaalada ciraaqiyiintu ku badan yihiin ee Sodertaje waxay noqota magaalada ugu badan oo dad ajaanib ah isku soo taagaan in ay xisbiga SD matalaan. Warbixintaan waxaa soo diyaariyay wakiilkeena Uppsala Saciid Cabdi Cismaan.
Maanta wadanka Sweden waxaa loo dareeray goobaha cod bixinta waxaana wali
Hogaamiyaha xisbiga midigta fog, Sweden Democrats (SD)
socdata cod bixintii doorashada guud, oo aan wali wax natiijo ah ka soobixin, Waxaase cabsi weyn laga qabaa in xisbiga xag-jirka ah(SD) uu markii u horaysay baarlamaanka wadanka Sweden wakiilo ku yeesho.
Inkasta oo ay soo badanaysay niyad wanaaga dadka shacabka ah u hayaan dadka shisheeyaha ah, hadana dhawr ra’yi aruurin oo la sameeyey waxay muujinayaan in xisbiga ku caanka baxay shisheeye nacaybka, doorashadani fursad u siin doonto in afkaartiisa mayalka adag markii ugu horeysay aqalka baarlamaanka gaarto.
Xisbigaan xag-jirka ah ee uu hogaamiyo Akesson ayaa lagu wadaa in uu helo codad ka badan boqolkiiba 4, taas oo u muuqata in uu baarlamaanka kuraas ku yeelan doono. Xisbigani malahan qorshe wax qabad oo cad marka laga reebo naceybka xad dhaafka ah ee uu u qabo guud ahaan qaxootiga, gaar ahaan Muslimiinta ku soo badanysa wadanka Sweden.
Hogaamiyaha xisbigani lama gabado nacaybka uu u qabo dad Muslimiinta ah wuxuuna muslimiinta horay ugu tilmaam qatarta ugu weyn ee Sweden dibada oga soo fool leh asagoona intaas ku sii daray in lagaba yaabo in uu Sweden ka dhaco kacdoon Islaami ah.
Soo kordhida dulqaadka
Afkaar aruurin uu sameeyey machadka magaciisa loo soo gaabiyo SOM, kana dhacday magaalada Göteborg dadkii ka soo qayb galay 36 boqolkiiba waxay u cadeeyeen in ay u arkaan in Sweden ajaanibta joogtaahi aad u badanyihiin. Markii lagarab dhigo isla ra’yi aruurin nooceeda ha ,oo la sameeyey 1993 natiijadii ka soo baxday waxay is dhinta 52boqolkiiba, waxaa dadka arimahan ka hadalay u aanaynayaan in ay jiraan ururo ka dhaqaalo badan kana fir-fircoon xisbiga xag-jirka ah, oo u ol-oleeya cunsuriyad nacaybka.
Dhanka kale ayada oo uu soo hagaagayo tobankii sono ee la soo dhaafay xariirka ka dhexeeya dadka wadanka u dhashay iyo kuwa soo galay, hadana waxaa aad u soo badanaya dadka kasii fagaanaya diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta ah. Jaamacada la yiraahdo Linnaeus, oo ayana dhankeeda isku dayday in ay wax ka ogaato dadka reer Sweden sida ay u arkaan Islaamka iyo mulimiintaba waxay ku ogaato in boqolkiiba 50 dadka wadankan u dhashay aysan u riyaaqsanayn diinta Islaamka iyo Muslimiinta midnaba halka 19 kali ah u arkaan in muslimiintu xaq u leeyihiin in diintooda sida ay doonaan iyaga oo xor ah in ay ugu cibaadaysan karaan.Andreas Malm oo buug ka qoray Islaam nacaynka( Islamophobia) ka jira Sweden ayaa hoosta ka xariiqay in xataa laga yaabo in wadamo kale oo Europe ah lagu arko Islaam nacayb caynkan oo kale ah.
Jimmie Akesson, hogaamiyaha xisbiga xag-jirka ah wuxuu ku adkaysanayaa in aan xisbigiisu cunsiri ahayn uuna aqbalayo bulsho dhaqamo kala duwen leh, si uu hadalakaas u meelmariyana wuxuu indhaha dadka ku jeediye nin ka mid ah Kiristanka laga tirada badanyahay ee Ciraaq, kaas oo ku biiray xisbiga midigta fog. Ninkan Ciraaqiga ah ee xisbigaas maciinka biday ayaa ku doodaya in xisgigaani yahay xisgiga kali ah ee ka soo horjeeda in labo qof oo isku jinsi ah is guursadaan. Magaalada ciraaqiyiintu ku badan yihiin ee Sodertaje waxay noqota magaalada ugu badan oo dad ajaanib ah isku soo taagaan in ay xisbiga SD matalaan.
Warbixintaan waxaa soo diyaariyay wakiilkeena Uppsala Saciid Cabdi Cismaan.